Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : 2012
ဂျူနီယာဝင်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂
သက္ကရာဇ်၂၀၁၂က ကမ္ဘာပျက်မှာတဲ့လား။ဒါ တကယ်ပဲဖြစ်ပါစေလို့ ငါဆုတောင်းတယ်။
ငါ့ဆုတောင်း ဘယ်သူမှနားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ စဉ်းစားကြည့်၊ ငါတို့ကမ္ဘာကြီးက ရက်စက်တဲ့လူသားတွေနဲ့ အာဏာရှင်တွေ ကြီးစိုးနေကြတာ။ အကယ်၍များ ၂၀၁၂မှာ ကမ္ဘာကြီး တကယ်ပျက်ခဲ့ရင် အဲသည်အာဏာရှင်တွေအပါအ၀င် အားလုံးအားလုံး ကမ္ဘာပျက်တဲ့အထဲ ပါသွားမှာ။ အပြစ်မရှိတဲ့ လူသားတွေလည်း ပါကုန်မှာပေါ့။ … အဲသည်လိုဆိုတော့ … င့ါကို ရူးနေပြီလို့ ထင်နေမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့လည်း ငါတို့ သေသလို သေကြရမှာလေ။
ငါတို့ကမ္ဘာကြီး တန်ခိုးအာဏာရှိသူတွေလက်ထဲ အသုံးခံပစ္စည်းတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ရွှေ၊ ရေနံ၊ သဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေကို သူတို့က ပိုက်ဆံအတွက် အသုံးချပစ်ကြတယ်။ ငါတို့ရဲ့ လှပတဲ့ တောင်တန်းတွေ၊ စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်တွေ၊ှ အဆုံးမရှိတဲ့ ပင်လယ်တွေ၊ ကြွယ်ဝတဲ့ သစ်တောတွေ၊ ပေါများလှတဲ့ စိုက်ပျိူးရေုးလုပ်ငန်းတွေ၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ လေထုတွေကို အခုဆိုရင် သူတို့က ရေတို ရေရှည် စီမံကိန်းတွေ အကြောင်းပြပြီး သဘာဝကမ္ဘာကြီးကို ဖျက်ဆီးပစ်နေကြပြီ။
ငါတို့ရဲ့သဘာဝအလှတွေဟာလည်း ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်တဲ့သူတွေလက်ထဲမှာ ညစ်နွမ်းကုန်ရပြီ။ “တန်ခိုးအာဏာသာ အမှန်” ဆိုတဲ့ ကြွေးကျော်သံကသာ ကမ္ဘာကို လွှမ်းလို့။
အကယ်၍များ ကမ္ဘာကြီးပျက်မှပဲ သည်လိုတန်ခိုးအာဏာတို့၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်မူတို့ကို ပျက်ဆီးစေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်… အို… မြန်မြန်သာ ပျက်လိုက်စမ်းပါတော့။ ဒါက ကမ္ဘာကြီးက အသည်းနှလုံးကင်းမဲ့တဲ့လူသားတွေကို ပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်။
အဖိုးတန်တိရိစ္ဆာန်တွေလည်း မျိူးတုံးလုမတတ်ကို တကယ့်ကို ခြိမ်းချောက်ခံနေရတဲ့ အနေအထား။ လူတွေရဲ့ လက်ထဲ ပျက်စီးသွားကြရတာ။ ဒီလိုပြစ်မူတွေကို တားဆီးနိုင်တဲ့ ဗီတိုဆိုတာလည်း မရှိ။ အပြစ်မဲ့လူသားတွေကလည်း သေလုမျောပါး၊ စိတ်ပူပန်မူများစွာနဲ့ အာဏာရှင်တွေချိမ်းခြောက်တာကို ခံနေလိုက်ရတာ။
သည်တော့ ငါတို့လည်း ကမ္ဘာကြီးရဲ့အပြစ်ပေးဒဏ်ကို အဲသည်လူယုတ်မာတွေနဲ့အတူတူ အဆုံးသတ်လိုက်ကြရအောင်။
သေဖို့များ မကြောက်လိုက်ပါနဲ့၊ ငါတို့က မျော်လင့်ချက်အားလုံးဆုံးရှုံးပြီး သေလူတွေ ဖြစ်ပြီးသားမို့ပါ။ ဒီသေမိန့်ဟာ အာဏာရှင်တွေကို နိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးမျော်လင့်ချက်ပဲ ဆိုတာ ယုံကြည်ရင်း ပျော်ပျော်ကြီး သေပွဲဝင်လိုက်ကြရအောင်။
အင်း … တစ်ခုတော့ ဆုတောင်းလိုက်ပါရဲ့။ ဒီကမ္ဘာပျက်တဲ့နေ့ဟာ လူသားအားလုံး အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး၊ အားလုံး အားလုံးကို တန်းတူရည်တူ ခံစားခွင့်ပေးတာ ဖြစ်ပါစေ။ မင်းတို့အာဏာရှင်တွေ နောက်တနေ့ မနက်ခင်းအလင်းရောင်ကို ဘယ်တော့မှ မတွေ့ မမြင်ကြရပါစေနဲ့။ ။
(Junior Win ရေးသားသော The Last Wish ကို ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ထားသည်။)
Posted by MoeMaKa at 11:52 PM No comments:
Under the Moonlit Night 2
လရောင်သာတဲ့ လပြည့်ညအောက်မှာ (၂)
ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၂
“လရောင်သာတဲ့ညပြည့်ညအောက်မှာ ဘယ်သူက ကျွန်မနဲ့အတူ ကမ္ဘာကြီးကို အလင်းတွေ ထွန်းညှိပေးချင်ကြပါသလဲ“။ ဟောသည် လပြည့်ညအောက်မှာ ဖတ်ထားမိတဲ့ကဗျာတစ်စကို ငြီးလိုက်မိတယ်။
ဒီလပြည့်ညမှာ တောင်တန်းတွေဆီက ငိုကြွေးသံတွေကို ကြားတယ်။ ဒါပေမယ့်သည်လို လပြည့်ညသန်းခေါင်ယံမှာ ဘာတွေများဖြစ်ကြမှာလဲ ဆိုတာကို မသိဘူး။ င့ါနှယ့်.. ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာလား … ဟောသည်နောက်တနေ့မနက်စောစောကြီးမှာ ဘာတွေဖြစ်ကြမှာလဲ ဆိုတာကို မသိလိုက်ဖူးလေ။
ဟောသည် ၀င်းပနေတဲ့ လပြည့်ဝန်းကြီးအောက်မှာပေါ့ …. တောင်တန်းတွေဆီက အော်ဟစ်သံတွေလား၊ သွေးဆာနေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး တွေရဲ့ နိုးထလာတဲ့အသံတွေလား …. အဲသည်လိုအဖြစ်တွေနဲ့ သည်လိုအချိန်မှာ ကျွန်မက အိပ်လို့ကောင်းနေလိုက်တာ။ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်တွေဟာ အဲသည်လပြည့်ညသန်းခေါင်ယံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီ။ ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေတဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ မျက်နှာသစ်၊ ညီးတွားသံတွေလွှမ်းနေတဲ့ လေထုကိုရူရိူက်၊ နာကြင်စွာငိုကြွေးသံတွေကို သောတဆင်၊ အသည်းနှလုံး ကွဲကြေကျနေတာကို ခံစား၊ ငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့လပြည့်ညအောက်က အဖြစ်ဆိုးကိုကြားလိုက်ရပြီ။
သည်လိုကြောက်စရာအဖြစ်အပျက်ကို မြင်သိကြားသိပြီးတော့ အသည်းနှလုံး မကြေကွဲ၊ မတုန်လှူပ်တဲ့သူ ရှိနိုင်ပါ့မလား။ ဒါအိပ်မက် များလား… ညက လသာနေတာကိုကြည့်ရင်း မိုးချူပ်သွားတာ မှတ်မိနေတယ်။
ညပြည့်ည… တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့… ဆိုတာတဲ့….. သံယာတော်များကို သင်္ကန်းတော်များ ကပ်လှူတဲ့ကာလ….. လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ကပ်လှူပ် ရတဲ့ ကာလတဲ့…. မေမေကြီးပြောနေကျစကား …. ဘဘကြီးရဲ့ ဆုံးမစကားသံတွေ ကြားနေတယ်…..။
သည်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရွှေဝါရောင်သင်္ကန်းတော်က အဲသည်မနက်စောစောကြီးမှာ ကြောက်ရွှံ့ဖွယ်အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံကြရမှာလဲ။ သည်လိုညပြည့်ညအောက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို မယုံနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မျက်မြင်သက်သေတွေက ပြောတယ်၊ အဲဒါမနက်စောစောကြီးမှာ တကယ်ပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သတဲ့။
သြော်… ကြင်နာခြင်းကင်းမဲ့တဲ့ သည်ကမ္ဘာကြီးကို ထားရစ်ကာ ထွက်ခွာသွားကြတဲ့ ကျွန်မအဘိုးအဘွားများအတွက် သည်လိုလသာသာ အောက်က တုန်လှူပ်ဖွယ်အဖြစ်ဆိုးကို မတွေ့မမြင်သွားရလေခြင်းလို့ ကြံဖန်ပြီး ၀မ်းသာမိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် သည်လိုလသာသာ အောက်မှာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အိပ်မက်ဆိုးကို ကြုံတွေ့ခဲ့သူများအတွက်တော့ ပုံမှန်အခြေအနေရောက်ဖို့ အချိန်တွေယူကြရပေလိမ့်ဦးမယ်။ အခုထိ နာကြင်ခံစားနေရဆဲသူတို့တွေကို ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ရမှန်းလည်း မသိ။ သို့သော်လည်း ဟောသည်ချရေးလိုက်မိတဲ့ ၀မ်းနည်းစာနာမိတဲ့ စကားလုံးများဟာ ကျွန်မအဘိုးအဘွားများရဲ့ နှလုံးသားတွေက ထွက်ပေါ်လာတာများဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ မှတ်တမ်းတင်ချင်တယ်။
(Junior Win ရေးသားထားသော Under The Moon Lit Night2ကိုကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ထားသည်။)
Posted by MoeMaKa at 7:36 PM No comments:
Book Review – Science in Action
စာအုပ်အမည် - လက်တွေ့သိပ္ပံ
ဘာသာပြန်သူ - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း
မူရင်းစာအုပ်အမည်- Science in Action (Rolin Kerrok)
ထုတ်ဝေသူ - စိတ်ကူးချိူချိူစာပေ
စာမျက်နှာ - ၇၆
ရောင်းဈေး - ၂၀၀၀ကျပ်
အခန်းပေါင်း - ၂၆ ခန်း
သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာများ၊ ကရိယာများ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊လက်နက်၊ပုံနှိတ်မူ၊ဆောက်လုပ်ေ၇း၊ရေကာတာဆည်များ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊စက်ဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ကားရတားလေယျဉ်၊သဘောင်္၊ရေဒါဆိုနာစက်တလိုက်၊အာကာသစသည်ဖြင့်သိပ္ပံနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုသူ့အခန်းနှင့်သူရှင်းလင်းပေးထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ရှေးရှေးတုန်းကဘီစီ၃၅၀၀ကနေစလို့ယခုခေတ်တိုင်တဖြေးဖြေးတိုးတက်လာသောသိပ္ပံ၊ကရိယာတန်ဆာပလာတွေကလည်းယနေ့ခေတ်စက်ကရိယာကနေဓာတုပစ္စည်းများတိုင်တိုးတက်နေသောပစ္စည်းများ၊လယ်ယာစိုက်ပျူိးမူမှာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများထွန်ယက်စိုက်ပျိူးနည်းများ၊ပုံနှိတ်မူအခန်းကမဂ္ဂဇင်းပုံနှိတ်စာလုံးများပြုလုပ်ပုံ၊ကွန်ပြူတာနဲ့ထိမ်းချူပ်ထားတဲ့နှူကလီယားဒုံးကျဉ်များစသည်ဖြင့်ရထားကားသင်္ဘောတည်ဆောက်ပုံများကိုသိပ္ပံရူထောင့်ကနေအသေးစိတ်နည်းပါးရှင်းလင်းထားပါသည်။အခန်းများသည်သူ့ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူဆေးရောင်စုံရုပ်ပုံများဖြင့်ဖော်ပြထားရာဖတ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by MoeMaKa at 12:19 AM No comments:
၂၈ရက် နိုဝင်ဘာလဟာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တစ်နေ့ အဖြစ်
မြန်မာပြက္ခဒိန်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါ မီးထွန်းပွဲတော်လလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ခြံထဲမှာ
ဖယောင်းတိုင်တွေ၊ ရောင်စုံမီးသီးလေးတွေနဲ့ လရဲ့ အလင်းရောင်ကို ပိုပြီး တောက်ပသွားအောင်
“လရောင်သာတဲ့တညမှာ ဘယ်သူက ကျွန်မနဲ့ အတူ ကမ္ဘာကြီးကို အလင်းတွေ
ထွန်းညှိချင်ကြပါသလဲ”၊ အခုနလေးတင်က ဖတ်ထားတဲ့ကဗျာတပိုင်းတစကို ညီးမိတယ်။ ကျွန်မရဲ့
ငယ်ဘ၀ကို သတိရတယ်။ ဘယ်အိမ်ကမှ မီးထွန်းရတဲ့ညတွေကို မီးမထွန်းဘဲ ကျော်သွားတာ မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ တချိူ့က မီးထွန်းဖို့ မေ့နေကြလေရဲ့။
ဆိုတော့ အခုကမ္ဘာကြီးတည်ရှိနေတာကို မေ့သွားကြလို့များလား။
သို့သော် ကျွန်မတို့ရဲ့လမင်းကြီးက သူမရဲ့အလင်းရောင်နဲ့
ကမ္ဘာကြီးကို အလင်းရောင်ပေးထားတယ်။ ဒါကြောင့်များ လူတွေ မီးထွန်းဖို့ မေ့သွားကြတာများလား။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးက လရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့် တောက်ပနေတာကိုး။ သူမရဲ့အလင်းက
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို အရိပ်တောင်မရအောင် နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာလိုပဲ လင်းလက်နေတယ်။
လပြည့်မှာ မီးထွန်းဖို့မေ့နေသောလည်း လရဲ့တောက်ပလင်းလက်တဲ့ အလင်းတန်းတွေက ကမ္ဘာကြီးကို
ဘယ်သူမှ လပြည့်ညမှာ ပုန်းခိုနေလို့ မရပါဘူး။ သည်လို
လှပတဲ့လမင်းကြီးကို တွေ့ရတာ ကျွန်မ၀မ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်။ မိခင်လမင်းကြီးရေ… ကျွန်မတို့ရဲ့
အလုပ်တွေသိပ်များတဲ့ သည်မြို့ သည်ရွာ ခရီးဆက်နေရသော်လည်းပဲ၊ ၀မ်းနည်းငိုကြွေးနေတဲ့
တောင်တန်းတွေရဲ့ အော်သံတွေကို ကြားနေရသောလည်းပဲ၊ နေလုံးကြီးထွက်လာတာကို မြင်ရတာလေးကိုပဲ
ကြည့်ပြီး ၀မ်းသာနေရမှာလား။ အလင်းတန်းတွေနဲ့တောက်ပနေတာကိုပဲ ကြည့်ပြီး ကြည်နူးနေရမှာလား။
ကောက်ရိတ်သိမ်းကြ ပျိူးကြဲကြတဲ့ ရာသီပွဲတွေကိုကြည့်နေရတာကိုပဲ ပျော်ရွင်ကြေနပ် နေရမှာလား။
ဟောဒီ မုန်းတီးမူတို့၊ အာဏာရှင်တွေ နှိပ်စက်တာတို့၊
ကြောက်ရွံ့မူတို့တွေက လူသားတွေရဲ့ နှလုံးသားမှာ အမြဲတန်းအမြစ်တွယ်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူး
ဆိုတာကရော တကယ်ပဲလား။ ကျွန်မတို့ရဲ့ မျက်ရည်တွေ မြန်မြန်ပဲ ခြောက်ခမ်းပြီး အလုပ်တွေသိပ်ရူပ်နေတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့စိတ်ထဲကို
ဖယောင်းတိုင်လေးနဲ့ လပြည့်ညကို ထွန်းညှိဖို့ သတိပေးလိုက်ပါဦးလေ။ ဟောသည်လိုချိူမြိန်တဲ့စာလုံးတွေနဲ့
ကမ္ဘာကြီးကို မျော်လင့်ချက်အလင်းရောင်လေးပေးပြီး နိုက်တင်းဂေးရဲ့ နှူတ်ဖျားမှာ တေးသီးချင်းအဖြစ်
သီကြွေးရင်း ဟောသည်ကမ္ဘာမှာ အားလုံး ရန်သူများ ကင်းဖို့ဆုတောင်းကာ လမင်းကြီးကလည်း ကျွန်မတို့ဘက်က
တသက်လုံး ထွန်းလင်းတောက်ပ ပေးနေပါစေသတည်း။
(Junior Win ရေးသားထားတဲ့Under The Moon Lit Night
Posted by MoeMaKa at 10:21 PM No comments:
ကျေးဇူးရှင်စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိနယ ပျံလွန်တော်မူ။
Posted by Junior Win at 9:15 PM No comments:
ဂျူနီယာဝင်း၊ သြဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၂
ကျွန်မတို့မိသားစုက ဘဘဦးကြည်မောင်မိသားစုနဲ့ အလွန်ရင်းနှီးပါတယ်။ အဲသည်အမှတ်တရပွဲဖိတ်စာ ၃ စောင်တောင် ရပါတယ်။ ကျွန်မဖေဖေကလည်း အစီအစဉ်မှာစကားပြောရမှာဆိုတော့ လိုက်နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပွဲလေးတစ်ခုအကြောင်းပေါ့။
အစီအစဉ်စတင်ကြောင်းကြေညာခြင်း၊ နှစ်ပတ်လည်ပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းများအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ ဦးကြည်မောင်ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်း ကိုဖတ်ပြခြင်း (မခင်မိမိခိုင်)၊ အမှတ်တရစာဖတ်ကြားခြင်းနဲ့ အမှတ်တရစကားများပြောကြားခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာအမှတ်တရစာကို ဆရာပြည်သွေးနိုင်ဖတ်တယ်။ နောက်တော့ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်၊ ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်၊ ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း၊ ဦးမြတ်သိန်း (ခ)ပေါ်လ်နဲ့ နောက်ဆုံးဦးဇော်ရမ်းက ပြောကြပါတယ်။
အစီအစဉ် ၅ကတော့ ခုနကတက်ပြောသွားသူတွေအစီအစဉ်ကျင်းပရာမှာ ကူညီသူတွေနဲ့ တို့ရိုးရာစားသောက်ဆိုင်ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်။ နောက်ဆုံး အစီအစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာပါတယ်။
လာတဲ့ပရိသတ်တွေကို အမှတ်တရစာများကို အ၀င်ဝမှာရေးခိုင်းတာနဲ့ ကျွန်မလည်းစိတ်ထဲရှိတာလေး ကောက်ရေးပေးလိုက်ဖြစ်တယ်။ ပရိသတ်များကို အစီအစဉ်မစတင်ခင်မှာ အစီအစဉ်စာရွက်တွေ ဝေတယ်။ ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်က သူရေးထားတဲ့ “တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှ ကျွန်တော့အမျိူးသားရေးစိတ်ဓါတ်” ဆိုတဲ့မိတ္တူစာရွက်တွေကို ဝေပေးတယ်။ တက်ရောက်သူများ ထောင်ချီပြီးရှိလိမ့်မယ်။ ခုံများအပြည့်ပဲ။ ခန်းမက တော်တော်ကျယ်တယ်။ အပြင်မှာတော့ မိုးကတော်တော်ရွာနေတယ်။ ဘဘဦးကြည်မောင်ဓါတ်ပုံများနဲ့ ဘဘရဲ့အမှတ်တရစာများကို အပေါက်ဝနားမှာရယ်၊ ရှေ့နားမှာရယ် ထောင်ထားပေးတယ်။
အရင်ဆုံးဆရာပြည်သွေးနိုင်က ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာရဲ့ အမှတ်တရစကားကဗျာကို ဖတ်ပါတယ်။ ဒဂုန်တာရာရဲ့စကားသံများကို တိုက်ရိုက်နားဆင်လိုက်ရသလိုပါပဲ။ ဘဘဦးကြည်မောင်နဲ့ အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ အနုပညာမိတ်ဆွေရင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ ဦးကြည်မောင်က တပ်ထဲ ၀င်သွားပေမယ့် သူ့ရဲ့အနုပညာကတော့ ပျောက်မသွားဘူး။ … အစရှိတဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့စာသားများ ကိုကြားရတာ ကြက်သွေးမွေးညှင်းတောင် ထမိပါရဲ့။
ဘဘဦးတင်ဦးပြောသွားတဲ့အထဲမှာ ဘဘကိုဦးကြည်မောင်က အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တာတွေနဲ့ ဦးကြည်မောင်က စီနီယာအဖြစ်နဲ့ တပ်ထဲမှာ ခင်မင်သိကျွမ်းခဲ့ရပုံတွေ နားထောင်လိုက်ရတယ်။ ဒါတွေဟာ သိပ်ကို အမှတ်ရစရာကောင်းတဲ့ ရှေးဟောင်နှောင်းဖြစ်တွေပါပဲ။
ဘဘဦးဝင်းတင်က အပေါ်ဝစ်စကုပ်ရိုးရာအကျီကို အပေါ်က ထပ်ဝတ်ထားတာ အမြင်ဆန်းတာပေါ့။ ဘဘဦးဝင်းတင်ကတော့ သူကဘဘဦးကြည်မောင်ကို မသိပါဘူး … တဲ့။ မသိဘူးဆိုတာဟာ လုံးဝမသိတဲ့သဘော မဟုတ်ပါဘူး။ ဘဘဦးကြည်မောင်ကို ကောင်းကောင်းကြီးသိတာပေါ့။ လူချင်းမသိတာကို ပြောတဲ့အကြောင်းတွေပြောရင်း သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်လည်သတိတရပြောသွားပါတယ်။
နောက် ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့် ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ ဘဘဦးကြည်မောင်လို ပုဂ္ဂိလ်ကြီးက သူ့ကို ခင်ခင်မင်မင် လာရောက်နှူတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်အမှတ်တရအဖြစ်များ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ် အကြောင်းများကို ပြောပြသွားပါတယ်။ ကျောင်းသားသပိတ်အကြောင်းကတော့ ကျွန်မမှတ်မိသလောက်ပြောရရင် ဘဘဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဝင်းတင်တို့ ပြောတဲ့အထဲမှာလည်း တော်တော်များများပါတယ်။
နောက်တော့ ကျွန်မဖေဖေ ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာ အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံး ၂ ချက်ပါပါတယ်။ တစ်ချက်က ဖေဖေ့အနေဲ့ သတ်မှတ်တဲ့လူငယ်တွေဆိုတာ အသက်၆၀မပြည့်သေးသူတွေဖြစ်တယ်။ အခုရည်ညွှန်းတဲ့ အဲသည် အသက်၆၀မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေကို ဦးကြည်မောင်ထားခဲ့တဲ့ပညာအမွေကို ဘယ်လိုဆက်ခံရမလဲ ဆိုတာပြောတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ပြောသင့်မပြောသင့် ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ အခုတော့ပြောတော့မယ်လို့ အစချီကာ အဲသည်အသက်၆၀မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေဟာ "အခု ၃နှစ်" ဘာမှမလုပ်ဘဲ စာကိုပဲဖတ်ကြပါ။ စာကြည့်တိုက်တွေကို သွားပါ။ စာအုပ်တွေကို ရှာဖွေဖတ်ပါလို့ ပြောသွားပါတယ်။
နောက်ဦးမြတ်သိန်း(ခ)ပေါ်လ်က ဖေဖေပြောသွားတဲ့ စာဖတ်ဖို့အချက်ကို သူအလွန်သဘောကျလို့ ကျေးဇူးတင်ထောက်ခံကြောင်း ပြောတယ်။ ဘဘဦးကြည်မောင်ကလည်း စာဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ်။ ဘာစာအုပ်ဖတ်ရမလဲ မေးတော့ ဘဘက စာပဲ … ဘာဖတ်ဖတ်၊ ဖတ်ရင်တော်ပြီ စသဖြင့် ပြောသွားကြောင်းများကို အမှတ်ရပြန်ပြောပါတယ်။
နောက်ဆုံး ဦးဇော်ရမ်းကတော့ ဘဘဦးကြည်မောင်ထားခဲ့တဲ့စကားများ၊ မိန့်ခွန်းများ၊ ကောက်နှူတ်ချက်များကို အားပါးတရနဲ့ တင်ဆက်သွားတာကို နားဆင်လိုက်ရပါတယ်။
တစ်ခုကတော့ ဘဘဦးကြည်မောင်အကြောင်း အမှတ်တရပြောတဲ့အထဲက ဒဂုန်တာရာရဲ့စာသားမျာထဲမှာ ဦးကြည်မောင်က အနုပညာသမားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပါတယ်။ အဲသည်မှာ အစီအစဉ်ကြေငြာသူက ဒါကို အခုလိုဖြည့်ပြီးပြောတယ်။
"ဟုတ်တယ်။ ဦးကြည်မောင်က အနုပညာသမား ဘယ်လောက်ဟုတ်သလဲ ဆိုရင် မကြာခင် ဗမာပြည်ပြန်လာတော့မယ့် အဆိုတော်မာမာအေးဟာ ဦးကြည်မောင်တပည့်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ “ပြောပြစရာတွေတပုံကြီးရှိသေးတယ်“ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးများကို "မိုးမခ" မှာဖတ်ကြပါလို့ ကြေငြာသွားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အစီအစဉ် ၄ မှာ ဘဘဦးဝင်းတင်ပြောအပြီးမှာ မင်းကိုနိုင်မှ ဘဘဦးကြည်မောင်အမှတ်တရစကားများ လာရောက်ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်မှာမှ အစီအစဉ်အတိုင်း ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်၊ ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း၊ ဦးမြင့်သိန်း(ခ)ပေါ်လ်နဲ့ ဦးဇော်ရမ်းတို့စကားများ ဆက်လက်နားဆင်ကြရပါတယ်။
အစီအစဉ်က ၉ နာရီခွဲလောက်မှ စဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁နာရီခွဲကျော်လောက် ပြီးတယ်။ ဘဘဦးတင်ဦးက အစီအစဉ်ပြီးလို့ စားသောက်တဲ့အစီအစဉ်အထိ မနေဘဲ ပြန်သွားတာကြောင့် မနှူတ်ဆက်လိုက်ရဘူး။ အခုလို ကျန်းကျန်းမာမာမြင်တွေ့ခဲ့ရလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ပွဲပြီးတော့ လူတွေထကြ နှူတ်ဆက်ကြရင်းနဲ့ တစ်ယောက်က သူ့မိတ်ဆွေကိုလှမ်းပြီး လက်ဆွဲနှူတ်ဆက်ရင်း
“ခင်ဗျား အသက်၆၀ မကျော်သေးဖူး မဟုတ်လား။ လူငယ်ပဲ။ စာဖတ်ရမယ်“
လို့ပြုံးပြီးပြောနေကြတာ ကြားလိုက်တယ်။ အင်း…. အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဖေဖေ့ကိုပြန်ပြောရဦးမယ်လို့။ အားလုံးပြီးတော့ အကျွေးအမွေးနဲ့ ဧည့်ခံတယ်။ ပဲနဲ့ချက်ထားတဲ့ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်း၊ ဟင်းချိူရယ်၊ အသီးအနှံများနဲ့ ကော်ဖီတိုက်ပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းလည်း သောက်လို့ကောင်းတယ်။ ကျွန်မကဗိုက်ဆာနေတာ ကြာပြီဆိုတော့ အားပါးတရစားကောင်းကောင်းနဲ့ စားလိုက်တာပေါ့။ နောက်တော့ အန်တီကြည့်ကိုနှူတ်ဆက်ပြီး ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ အန်တီကြည်က သူ့သမီးနဲ့ အတူတူလာကြတာ။ အန်တီကပိန်သွားပေမယ့် အရမ်းနေကောင်းတယ်။ ကျွန်မကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်။ နားကသိပ်မကြားဖူးလို့ ဆိုပေမယ့် ကျွန်မမေးတာတွေ ချက်ချင်း ကောင်းကောင်းပြန်ဖြေနိုင်တာပဲ။
Posted by MoeMaKa at 9:14 PM No comments:
စာအုပ်အမည် - လေ့လာစရာသင်္ချာ A to Z
ရေးသူ - ဘာသာပြန် - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း
မူရင်း - Oxford Children A to Z (David Glover)
ဖွင့်ဆိုချက် - အခြေခံအဆင့်သင်္ချာပညာကိုသင်္ချာဝေါဟာရများဖြင့်ချဉ်းကပ်သင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး - ၁၅၀၀ ကျပ်
စာမျက်နှာ - ၆၂
စာအုပ်အရွယ်အစား - ၁၂.၅ စင်တီ x ၁၈.၅ စင်တီ (ဆိုက်ကြီး)
Posted by MoeMaKa at 9:27 PM No comments:
၁၉ ဇူလိုင် မမေ့နိုင်စရာများ
ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၂
၁၉၄၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ရက်နေ့ကို ကျွန်မတို့ လွယ်လွယ်နှင့် မမေ့နိုင်ပါ။ ကျွန်မ၏ အဘိုးအဘွားများက ထုိုနေ့ဟာဖြင့် မျက်ရည်များနဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာများ လွှမ်းမိုးနေသောနေ့ဟု အမြဲပြောကြတာကို ကျွန်မမှတ်မိနေပါသည်။
“မြို့ထဲမှာ ဘယ်နေရာကိုပဲ ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်၊ ဘတ်စကားပေါ်၊ ရထားပေါ်၊ ဈေးထဲ၊ ယောင်္ကျားကြီးတွေ မျက်လုံးတွေစိုစွတ်၊ အမျိူးသမီးတွေ ငိုရှိုက်နေလိုက်ကြတာများ သူတို့အသည်းနှလုံးတွေကွဲကြေသွားကြသလို မြင်တွေ့ကြရတယ်”
သူတို့ ဘာကြောင့် ငိုနေကြသလဲ၊ သူတို့မျက်ရည်တွေက ဘာကိုဖော်ညွှန်းနေသလဲ ဆိုတာ မေးစရာမလိုပါ။
ကျွန်မအဘိုးက ပြောပါသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးသေဆုံးရင် သူ့မိသားစု သူ့ဆွေမျိူး မိတ်သင်္ဂဟများသာ ငိုကြွေးကြမှာပဲ တဲ့။ သို့သော် ထိုနေ့မှာတော့ အာဇာနည်တွေလုပ်ကြံခံရတဲ့ အဲသည်နေ့မှာတော့ သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ ဆွေမျိူးတွေသာမက မြို့ထဲက လူတိုင်း လူတိုင်း ပူဆွေးကြ၊ မျက်နှာပေါ် မျက်ရည်တွေ စီးကျနေလိုက်ကြတာ ပဲ တဲ့။ အားလုံးသည် ရုတ်တရက်ကြီး ထိတ်လန့်၊ ပူဆွေးလွန်းလို့ ဆွံ့အ၊ သူတို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောသူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြောက်စရာသတင်းဆိုးကြီးကို ကြားလို့ ဖြစ်ပျက်ကုန်ကြတာ။
၁၀ နာရီ ၃၇မိနှစ်။ နေရာကတော့ အလုပ်အမူဆောင်ကောင်စီ ပြည်နယ် အုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေး လုပ်နေတဲ့အခန်းတစ်ခုမှာ … ဥက္ကဌအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်မူအောက်က ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာ စိတ်ကူးနဲ့တောင် ပုံဖော်လို့မရတဲ့ အလွန်ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူသတ်မှုရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်သွားရသည်။ လူထုယုံကြည်ရသည့် ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်မြ၊ မန်းဘခိုင်၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိူ၊ မိုင်းပွန်စော်ဘွားစပ်စံထွန်း၊ ဦးရာဇတ်၊ ဦးဘ၀င်း၊ ဦးအုန်းမောင်၊ ကိုသက်ထွေးတို့ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ အာဇာနည်အထိမ်းအမှတ် စာအုပ်ကလေး၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာ ’Our Fallen Leader’ ဟူသည့် ထိုနေ့ ထိုအဖြစ်အပျက်အကြောင်း ရေးထားတာကို ယခုလိုတွေ့လိုက်ရသည်။
“ကာဘရိုက်တာ သေနတ် ရဲ့ စူးရှတဲ့ အသံရယ်၊ လေးလံထူထပ်တဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေက အဲသည်အခန်းထဲက ထိုးထွက်လာကြတယ်။”
(အဲသည် ဇာတ်ဝင်ခန်းကို The Lady ဆိုသည့်ု ရုပ်ရှင်ထဲ ထည့်ရိုက်ထားလိုက်ပုံကတော့ တက်တက်စင်အောင် လွဲနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဗိုလ်ချူပ်ကို လက်မ အနည်းငယ်အကွာလောက်ကနေ ပစ်စတိုသေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်ပုံကို ရိုက်ပြထားလေရဲ့။ အိုး … ကျွန်မ အဲသည်လောက်တော့ သိတယ်။ အဲဒါ ကာဘရိုက်တာ မဟုတ်မှန်း။ ဘယ်အရူးမဆို သိနိုင်တာ။ ကျွန်မတောင် သိတယ်။ အဲသည်ရုပ်ရှင်ထဲက အခန်းက ကျွန်မတို့ရဲ့ သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်ကြီး ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာပဲ။)
ရက်စက်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ထိုနေ့ကို လေးလံတဲ့တိမ်လိပ်တွေ၊ လျပ်စီးမိုးကြိုးတွေ၊ မိုးသားတွေက ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုက်တာ တတိုင်းပြည်လုံးကို ပို၍ ပို၍ ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုက်ပြန်လေသည်။ ကျွန်မ၏အဘွားးက ပြောတာကတော့ ထူထပ်တဲ့ မိုးသားတ်ိမ်လိပ်ကြီးတွေ သူတို့ပေါ် ဖိနှိပ်ထားလိုက်တာ ပြန်ပြီး မရုပ်သိမ်းတော့တဲ့ အတိုင်းပဲ တဲ့။ ဆိုးရွားတဲ့ သဘာဝတရားကြီးက တတိုင်းပြည်လုံးကို ပိုပြီးထိတ်လန့် တုန်လှူပ်သွားစေသတဲ့။
ထိုကဲ့သို့သော ၀မ်းနည်းစရာများ ရှိနေသော်လည်း ဘ၀သည် ဆက်လက်ဖြတ်သန်းနေပါသည်။ အချိန်သည် ကုစားပေးလိုက်သလို အစစအရာရာ ပုံမှန်ဖြစ်သွားသည်။
ရာသီစက်ဝန်း တပတ်လည်နေသလို ထိုနေ့သည်လည်း နှစ်စဉ် တပတ်ပြန်လည်လာပါသည်။ ကျွန်မက ထိုနေ့ကို ကလေးတွေ တွေးသလို ကျောင်းပိတ်ရက်ဟု မှတ်မိနေမိသလို ကျွန်မတို့၏ သူရဲကောင်းများ ဆုံးရှုံးရလို့ တတိုင်းပြည်လုံး မျက်ရည်ကျကာ ကြေကွဲခဲ့ရသော နေတစ်နေ့လည်း ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်သည် မျက်ရည်စများကို သစ်တုံးလို ခြောက်သွေ့သွားအောင် လုပ်နိုင်သလို ကျွန်မတို့၏ နှလုံးသားများကိုလည်း ရေခဲလို အေးစက်သွားအောင် ဖန်တီးလိုက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ညှာတာမှုမရှိစွာ ရွာသွန်းနေသောမိုးနှင့် ကြမ်းတမ်းစွာ တိုက်ခတ်နေသော လေပြင်းကို အခု သည်ဆောင်းပါးရေးနေသောအခိုက်မှာ ပြူတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းမြင်နေရပါသည်။
ထိုနေ့ ထိုရက်က ကျခဲ့သော မျက်ရည်များကို စိတ်ကူးနှင့်သာ ပုံဖော်နိုင်သော်လည်း ၁၉၄၇ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တုန်းက ရွာခဲ့သောမိုးကိုတော့ အခုလက်တွေ့ ခံစားနေရပါသည်။
(The Unforgettables အမည်နဲ့ ကျွန်မအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားသောThe Unforgettables ဟူသောဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ကာ စာဖတ်သူများအတွက် တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။)
Photo Credit - http://www.layoutsparks.com/1/37812/red-rain-clouds-fall.html
Posted by MoeMaKa at 9:32 PM No comments:
စာအုပ်အမည် - သတင်းစာလောက
ရေးသူ - ဒေါ်ခင်မျိူးချစ်
ပထမအကြိမ် - ၁၉၅၂ သြဂုတ်လ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း
ဒုတိယအကြိမ် - ၂၀၁၂ ဇွန်
စာမျက်နှာ - ၂၃၀
တန်ဖုိး - ၂၀၀၀ကျပ်
Posted by MoeMaKa at 3:08 PM 1 comment:
Book Advertisement – Your Five Sense
စာအုပ်အမည် - အာရုံငါးပါးအကြောင်း
ဘာသာပြန်သူ - တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း
မူရင်း - Your Five Senses (by Robert Quinn)
တန်ဖိုး - ၁၂၀၀ ကျပ်
စာမျက်နှာ - ၅၂
အခန်း - ၁၀ ခန်း နှင့် ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အိမ်စာနှင့် ရုပ်ပြအဘိဓါန်
Posted by MoeMaKa at 12:36 PM No comments:
Tribute to Ludu Sein Win
ဂျူနီယာဝင်း၊ ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၁၂
· ငါတို့၏ ခရီးမပြီးဆုံးသေး
· ဟောဒီရှည်လျားလှတဲ့ ခရီးလမ်းမှာဖြင့်
ငါတို့က ပန်းကလေးတွေလို ခြောက်သွေ့
သူရဲဘောကြောင်တဲ့သူ အခါတစ်ရာမက သေ ဆိုသလို
လောကကြီးထဲကနေ လူမသိသူမသိနဲ့ ထွက်သွား
သည်လိုနဲ့ ငါတို့ကို မေ့ပျောက်သွားကြမှာ။
· ငါတို့က သေရင်မြေကြီးဖြစ်သွားပေမယ့်
တောက်ပလို့ ခရီးဆက် ဖြတ်သန်းနေကြမှာ။
ငါတို့ကသာ သေမင်းတမန်အမှောင်ထုထဲ လျောက်လှမ်းနေပေမယ့်
သူတို့က မိုးကောင်းကင်ထဲ တလက်လက် ၀င်းလက်နေကြဦးမှာ။
အားလုံးက သူတို့ကို သတိရနေကြဦးမှာ။ ။
Posted by MoeMaKa at 9:07 PM No comments:
Junior Win - Interview with MRTV4- English Subtitle
Posted by Junior Win at 5:57 PM No comments:
Selected Article – Junior Win – The Pages of My Life
အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်စဉ်၂၃၂, ၂၀၁၁ခုနှစ် ဂျူလိုင်လတွင်ဖော်ပြခဲ့သောဆောင်းပါး။
stranger than fiction . (တကယ့်အဖြစ်အပျက်များသည်စိတ်ကူးယဉ်တာထက်တောင်ဆန်းကြယ်သည်)
မရှိကြောင်းနှင့်၊BSc ၀တ်စုံကိုသာဝတ်တက်ဖို့ပြောပါသည်။ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရသင့်ရထိုက်ပြီးသား အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဤသို့အလွယ်တကူပြောထွက်ခြင်းအပေါ်ကျွန်မနားမလည်သောလည်းMSc ၀တ်စုံကို
ဤသို့နှင့်သုံးကြိမ်မြောက်ရောက်လာပါသည်။MSc ၀တ်စုံမရှိဘူး။BSc ၀တ်စုံဝတ်တက်လိုက်လည်းဘာဖြစ်သ
ခံသည်ကျွန်မ မရရှိခဲ့သောအရာများနေရာမှာအစားထိုးဖို့ဟူသောရည်ရွယ်ချက်ကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိနေလေသည်။ ကျွန်မ၏ပတ်ဝန်းကျင်သစ်သည်အတိတ်ကဒဏ်ရာများကိုမေ့ပျောက်ဖို့များစွာအကူအညီပေးခဲ့ပါသည်။သို့ရာ
Posted by MoeMaKa at 10:29 PM No comments:
ဂျူနီယာဝင်း – စာအုပ်အယ်ဒီတာ ကော်လင်းဆဲလ်၏ ဖြောင့်ချက်
( အတွေးအမြင် အုပ် ၃၀၀ ပြည့်၊ ဇူလိုင်) မိုးမခ၊ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ ပြင်သစ် စာရေးဆရာမ ဖရွန်ဆွာစ် ဆာဂန်က ပြောတယ်။ “ကျွန်မစာမရေးဖြစ်ခဲ့ရ...
အတွေးအမြင် (၁၄၆)၊ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ သူတို့မှာ ထူးခြားတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရှိတယ်။ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စိတ်ကူးကမ္ဘာ နဲ့ အကောင်အထည် ...
ဂျူနီယာဝငျး - ကှနျပွူတာနညျးပညာတျောလှနျရေးသို့ ခွလှေမျးမြား (၄) (အတှေးအမွငျ၊ အောကျတိုဘာ ၂၀၁၉) မိုးမခ၊ အောကျတိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၉ (2001 ခုနှဈထု...
စာအုပ်အမည် - Puzzle3ညဏ်စမ်း ၃ ရေးသူ - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) ထုတ်ဝေသူ - ဦးလှတုိုး ရန်အောင်စာပေ ဆုိုင်အမှတ်(H)၊၁၂လုံး...
နီယာဝငျး ● ကှနျပွူတာနညျးပညာတျောလှနျရေးသို့ ခွလှေမျးမြား (၃)
ဂြူနီယာဝငျး ● ကှနျပွူတာနညျးပညာတျောလှနျရေးသို့ ခွလှေမျးမြား (၃) (မိုးမခ) စကျတငျဘာ ၃၊ ၂၀၁၉ (၂၀၀၁ ခုနှဈထုတျ M. Mitchell Waldrop (အမျ...
အဖိုးတန် စကားတစ်ခွန်း ဂျူနီယာဝင်း
(ပိတောက်ပွင့်သစ်၊ ဧပြီလ၊ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်။) အဖိုးတန် စကားတစ်ခွန်း If ဟူသည့် အသုံးတစ်ခုကို လေ့လာရင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ တွေ့လာရပါသည်။ If ကို...
IF (Rudyard Kipling) IF you can keep your head when all about you Are losing theirs and blaming it on you,If you can trust yourself when al...
ဂြူနီယာဝငျး - ကှနျပွူတာနညျးပညာတျောလှနျရေးသို့ ဝီနာ ထုတျပွသော ခေါငျးစဉျမြား
ဂြူနီယာဝငျး - ကှနျပွူတာနညျးပညာတျောလှနျရေးသို့ ဝီနာ ထုတျပွသော ခေါငျးစဉျမြား (အတှေးအမွငျ သွဂုတျလ ၂၀၁၉ ) (မိုးမခ) ဇူလိုငျ ၃၁၊ ၂၀၁၉ (2001...
ဂြူနီယာဝငျး - ကှနျပွူတာနညျးပညာတျောလှနျရေးသို့ ခွလှေမျးမြား
ဂြူနီယာဝငျး - ကှနျပွူတာနညျးပညာတျောလှနျရေးသို့ ခွလှေမျးမြား (အတှေးအမွငျ ဇူလိုငျ ၂၀၁၉) (Claude Shannon) မိုးမခ၊ ဇူလိုငျ ၆၊ ၂၀၁၉ (2001 ခုနှဈထ...
Dream Machine (10)
ကျေးဇူးရှင်စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီး ဦးဝိနယ ပျံလွန်တေ...
Junior Win - Interview with MRTV4- English Subti...
Selected Article – Junior Win – The Pages of My Li...